A ike mbanye bụ ebe data na-echekwara. Site n'ọnọdụ si a ike mbanye na 2.5 sentimita asatọ SATA ike mbanye dị ka PS3 ma ọ bụ Play Station 3 ike mbanye a kpụrụ. PS3 bụ usoro nke egwuregwu okosụhọrede. PS3 e zubere na-agba ọsọ pairing na ihe ọ bụla mpempe ngwá na-eji ya interface. Ọ na-eji dị ka a media center na-ekiri fim, Lee foto na ihe oyiyi, na-agagharị internet na ịnụ music. Nke a akpan akpan ike mbanye na-eji na-echekwa niile faịlụ na-echekwara n'ime usoro.
PS3 ike mbanye na-emi odude n'azụ ọzọ ike mbanye uzo mmiri cover n'akụkụ usoro. Ozugbo mmiri cover wepụrụ, na draịvụ ike ọkọkpọhi ikike nke na-enweta site na iwepu-acha anụnụ anụnụ retaining ịghasa na slides n'èzí ike mbanye onu usoro.
Nkebi nke 1: Nzọụkwụ nke PS3 ike mbanye mgbake
Ebe ọ bụ na unu niile media faịlụ dị ka na fim, foto na ihe oyiyi na-niile echekwara na PS3 ike mbanye, ha ga-efu ozugbo PS3 ike mbanye jiri. I kwesịrị ịma na ọ bụrụ na ngwaọrụ jiri n'etiti, mgbe ahụ, ọ bụ ike na-azụ ndị a data enweghị data mgbake software ma ọ bụ data mgbake ọrụ. Jiri ya tụnyere data mgbake ọrụ, data mgbake software ga-quicker ma dị ọnụ ala. Ná nkebi a a data mgbake software ga-ẹkenam naghachi faịlụ site na PS3 ike mbanye.
Nzọụkwụ 1: Download na wụnye software Wondershare Data Recovery. Nzọụkwụ 2: Jikọọ mpụga PS3 draịvụ ike na eriri USB na azụ USB n'ọdụ ụgbọ mmiri nke gị na kọmputa. Ọ bụrụ na ndị ike mbanye a ghọtara, mgbe ahụ, nri pịa akara ngosi nke My Computer ma họrọ Jikwaa. Mgbe ahụ Disk Management na mgbe ahụ ị ga-ahụ draịvụ ike gị ebe a. Site na-agbanwe mbanye akwụkwọ ozi, ị ga-enweta ya ndepụta na My Computer. Right pịa gị PS3 ike mbanye na-ahọrọ "ịgbanwe mbanye leta na ụzọ" ịgbanwe mbanye akwụkwọ ozi.
Nzọụkwụ 3: Gbaa ndị software.
Nzọụkwụ 4: Họrọ faịlụ na ụdị na mgbe ahụ mpụga mbughari draịva. Nzọụkwụ 5: Iṅomi mbanye na preview faịlụ, mgbe ahụ họrọ faịlụ na-recoverd, pịa "Naghachi".
Nkebi nke 2: Nchọpụta nsogbu nke PS3 ike mbanye njehie
Lee n'okpuru na-ise nkịtị njehie nke PS3 ike mbanye na ha ngwọta idozi njehie.
Ajụjụ 1: Olee idozi PS3 Ọ dịghị Signal Error.
Azịza: Mgbe ị pịa na menu na-egwu a egwuregwu, e itịbe ihe ọ bụla na ị na-aghọ ihe ike n'ihi na egwu egwuregwu ma mgbe ụfọdụ i nwere ike ọ bụghị. Na DVD na CD nke a bụ oké na-enwekarị nsogbu na nsogbu ị ukwuu. PS3 Ọ dịghị Signal Error a hụrụ mgbe ndị na-esonụ njehie nsogbu na-egwu egwuregwu. Ha bụ ndị a:
Unyi Disk: Mgbe ájá na unyi na-ewuli elu na disk ọ dị mwute ikwu na slows ala gị PC na-egwu egwuregwu. Ehichakwa ájá pụọ na a adụ ákwà na a okirikiri ngagharị. Nke a ga-enyere gị dozie PS3 Ọ dịghị Signal Error nsogbu.
Kpụchara akpụcha Disk: Iji zere scratches ị ga--gị PS3 diski ike na a igbe mgbe ọ bụghị na ojiji.
Unyi Lens: Nọgidenụ na-disk dị ọcha, nke a ga-oghere dị ọcha. N'ihi ya dị ọcha unyi oghere ị nwere ike idozi nsogbu ahụ. Ọcha unyi oghere i nwere ike dị nnọọ ịzụta oghere Cleaner maka DVD Player ma ọ bụ PS3 ike draịva na-eji ya mgbe ị na-egwu.
Ajụjụ 2: Olee idozi odo ìhè nke ọnwụ YLOD.
Azịza: Mgbe ma ndị CPU na GPU ina mgbagwoju si motherboard YLOD itịbe. The motherboard ndusụk ọkọkpọhi n'elu kpụ ọkụ n'ọnụ na PS3 odo ìhè amalite blinking. Akpa ego ma e nwere omume rụrụ USB. A mfe ma ubé rụrụ USB nwere ike ime ka nnukwu nsogbu. Dị nnọọ Malitegharịa ekwentị ahụ na usoro ọ bụrụ na ọ na-ahụghị. Kwụpụ cables na ikwunye-na ọzọ. Nọgidenụ na-ụlọ okpomọkụ nkịtị; abughi oyi ma ọ na-ekpo ọkụ. Gbaa mbọ hụ na ikuku mgbasa ke ụlọ dị mma. Ị nwere ike na-agbalị na-esonụ usoro idozi njehie:
Gbapụ mkpuchi na-ewepụ ndị kposara. Mgbe ahụ slide si eku na-edebe igbe dị na a ewepụghị elu. Ebe ahụ PS3 n'ime igbe na-eji a draya ntutu ịfụ si na-ekpo ọkụ ikuku. Mgbe otu awa ị ga-ahụ nsogbu ahụ na-edozi.
Ajụjụ 3: Olee idozi uhie ihuenyo ọnwụ
Azịza: Mgbe RSOD na egosiri na ihuenyo gị PC adịghị anabata ihe ọ bụla mgbanwe na-akwụsị ịnakwere ọ bụla iwu si gị n'akụkụ.
Ya mgbe ụfọdụ na-eme n'ihi na nsogbu kere na-emeputa kaadị na gị usoro. The ndịna-emeputa kaadị ọkwọ ụgbọala installs na-akpaghị aka ụfọdụ exe faịlụ nke nsogbu gị PC egosi RSOD. Ịgbanyụ kọmputa gị n'ozuzu fixes gị nsogbu.
Ajụjụ 4: Olee idozi PS3 Disk agụ njehie
Azịza: Nke a bụ njehie na Pop elu na-agwa gị na usoro bụ enweghị ike ịgụ disk. A-acha anụnụ anụnụ ray mbanye na-eji na PS3 nke na-enyere mbanye na-agụ egwuregwu CD etinyere na gị PC. Mgbe laser ada ada na-agụ disk a na-eme n'ihi na erratically ịrụ ọrụ nke gị mbanye. Nke a na-egosi na disk agụ njehie. Na nke a mkpa ka i nwere ndidi na-achọ na-emeghe PS3 ikpe iji dozie nsogbu.
Wepụ ike eriri na cables mkpa ka ị ebuli ndị HD ụzọ na-ewepụ-acha anụnụ anụnụ ịghasa si n'ime ngalaba nke PS3 ike mbanye. Iji wepu akwụkwọ ikike ihennyapade nnọọ na ị ihighari roba ụkwụ si n'ime ohere na-edebe ya onwe.
Wepu disk magnet na-acha anụnụ anụnụ ịghasa. Mepee metal mgbodo. Wepụ niile kposara na ugwu ọhụrụ laser ka metal mgbodo na-acha ọcha plastic clip. Gbakwunye rịbọn USB na clip ya azụ ka ọnọdụ. Gbakwunye metal brackets na achọ ha azụ. Fanye diski magnet na itinye ike USB. Mgbe e mesịrị na fanye-acha anụnụ anụnụ ray mbanye azụ n'ime usoro mgbe ahụ dochie-acha anụnụ anụnụ ịghasa snapping n'akụkụ panel na-akwado usoro.
Ajụjụ 5: Olee otú iji weghachi ike mbanye na PS3?
Azịza: Mgbe diski ike kwesịrị-eweghachi ma ọ bụ ọ ada ada iji nweta XMB, na PS3 ike mbanye na-egosi ozi iji weghachi ike mbanye na PS3 nọgidere. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi na ndị video njikọ na-adịghị arụ ọrụ nke ọma. Iji zere nke a na ozi na iji dozie nsogbu, họrọ Nchekwa mode na "Weghachi File System" ịrụzi mebiri emebi faịlụ nke draịvụ ike gị. Ọ bụrụ na nke a adịghị arụ ọrụ wee tinye mma mode ọzọ ma họrọ "wughachi Data Base". Nke a ga-ihichapu niile ozi gị, playlist na mgbanwe mere na gị ozi dị mkpa maka foto na niile. Nke a ga-wughachi PS3 nchekwa data ma ga ihichapu niile.
> Resource> Draịvụ> Olee naghachi Data si PS3 ike mbanye